Banyere Anyị - Staba Electric Co., Ltd.
Site na 2017, Staba amalitela ịme nyocha na mmepe na ngwaahịa chaja PD GaN.
GaN tech bụ mgbanwe nke ụlọ ọrụ chaja, chaja a nwere ike iji obere ihe ntanetị na ihe ndị ọzọ na-arụ ọrụ, si otú ahụ na-ebelata ngwa chaja GaN na ọgbọ okpomọkụ, ma melite arụmọrụ.
Ka ọ dị ugbu a, na-ewebata ngwa ọrụ akụrụngwa na afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ bụghị naanị belata ọnụ ahịa ọrụ, bulie nrụpụta, kamakwa wulite Staba PD chaja ọnụ ahịa asọmpi, ma melite ogo na ọkwa dị elu site na teknụzụ akpaka; ewebata ọhụrụ akpaka ule usoro na ịka nká usoro, belata oru na-eri n'out oge, melite PD USB chaja àgwà na mba ozo, ngwaahịa ọdịda ọnụego iru PPM.
N'oge mmepe ahụ, Staba na-elebara nnukwu ikike nke ikike ọgụgụ isi na ntọala nke usoro njikwa ụlọ ọrụ anya. Staba bụ ụlọ ọrụ izizi na mpaghara anyị iji nyefee nzere nke IPMS nke GB / T29490-2013, nwere ikikere ikike izizi mbụ nke 4 na United States na European Union, yana ihe karịrị 58 mbụ ihe ntinye akwụkwọ China na ihe eji achọpụta ihe.
A kwadoro / re-mma dị ka ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke mba maka ugboro atọ ugboro abụọ ， anyị nwere ụlọ ọrụ teknụzụ ụlọ ọrụ abụọ: Guangdong Province Intelligent Power Engineering Technology Center, yana Zhongshan City Power Product Engineering Technology Center. Site na ụbọchị mbụ nke ntọala ya, etinyere sistemu ngwanrọ ERP na sistemụ njikwa ISO9001 n'akụkụ ọ bụla nke njikwa ụlọ ọrụ, na-eme ka arụmọrụ nke sistemu na-aga nke ọma. Ugbu a anyị nwere ndị ọrụ 340, nke 33 bụ maka usoro R & D na 38 bụ maka usoro njikwa ụlọ ọrụ. N'otu oge ahụ, anyị nwere nkwado siri ike na mmekọrịta mmekọrịta na ọtụtụ ụlọ ọrụ nyocha na ndị ọkachamara na ụlọ ọrụ ahụ, na-anwa ịme ngwaahịa, ọrụ na teknụzụ anyị na mbido ụlọ ọrụ ahụ.
Staba ga-achọ ịmepụta uru-mmeri ya na ndị ahịa site na ogo dị elu, ọnụahịa asọmpi, nzaghachi ọsọ ọsọ oge na nkwado.
Ikike Thedị uru ma ọ bụ nlanarị kachasị dịrị n'ụwa
Innovation Ihe kachasị mkpa bụ ihe mmadụ na-eche na afọ ojuju ndị ahịa
Ndị Ahịa Mbụ nwere obi ekele bụ ihe kachasị mkpa, A naghị ekewapụ uto anyị na ndị ahịa